Vanhu Vorwariswa neMvura Dzakasviba kuZimunya
Kurume 03, 2014
ZIMUNYA, MANICALAND — Vagari vekuZimunya vanoti havasi kufara nemvura yavanoshandisa mudzimba dzavo inobva kuZimbabwe National Water Authority, ZINWA.
Vagari ava vanoti mvura iyi ine tsvina izvo zviri kurwarisa vanhu vazhinji nezvirwere nemanyoka.
Zimunya iri kuchamhembe kweguta reMutare uye iri zvinhambwe zvinoita makiromita makumi maviri kubva muguta. Musha weZimunya ungangoita vagari vanosvika zviuru gumi.
Mumwe Mugari wemunzvimbo iyi, Va-Simon Sidhuna, avo vane nemakore makumi manonwe nemapfumbamwe ekuberekwa, vanoti vazhinji vevagari vari kurapiwa nenyaya yehurwere hwavanofungidzira kuti huri kukonzerwa nemvura yavari kushandisa.
Mumwe mugari wemuZimunya, uye vari nhengo yeZimunya Combined Residents and Ratepayers Association, Va Victor Dhliwayo, vanotiwo ongororo yavakaita sevagari iri kuburitsa pachena kuti mvura yavari kushandisa yakasviba, uye haikodzeri kunge ichishandiswa sezvairi.
Imwe nhnengo ye Zimunya Combined Residents Ratepayers Assocoation, Va Herbert Gonyora, vanotiwo havasi kufara nemabatirwo ari kuitwa zvichemo zvavo nevakuru veZINWA maererano nenyaya yemvura. Va Gonyora vanoti pari zvino pane vanhu vanopfuura zana vakanorapiwa nekuda kwemvura dzavari kunwa idzi.
Kanzura we ward 32 kuZimunya, Va Joshat Gupa, vanoti naivowo vakarwara vakanorapwa mushure mekushandisa mvura iyi. Asi VaGupa vanoti havana humbowo hunobudisa pachena kuti vakarwara nekuda kwemvura here kana kuti kwete sezvo pachine ongororo ichiri kuitwa pachipatara.
Kanzura Gupa vanoti zvakare kunze kweurwere uhu, vagari vari kuchema chema nemari yemvura yavanonzi vabvise iyo vanoti yakawandisa kunyange hazvo mvura yacho ichiuya nenguva iri kure.
Studio7 haina kukwanisa kutaura nevakuru vepachipatara ichi kuti tinzwe kuti vanhu vangani varapwa kusvika pari zvino nenyaya yemvura dzisina kuchena dzavari kunwa.
Asi mumwe mukoti wepachipatara cheZimunya aramba kudomwa nezita rake sezvo asingabvumirwi kutaura nevatori venhau anoti ichokwadi kuti vagari vakawanda vari kurapwa pachipatara ichi.
Asi mukoti uyu anoti hazvisati zvozivikanwa kuti vagari vari kurwariswa nekuda kwemvura yavanoshandisa here kana kuti kwete sezvo pachiri kuitwa ongororo.
Asi mukoti uyu anoti sevanhu vezvehutano vari kukurudzira vagari kuti vatange vabhoirisa zvakasimba mvura pamoto vasati vainwa.
Va Desire Mlambo vanoshandira bazi reZINWA kuZimunya. VaMlambo vanoti pachiri kuitwa ongororo zvakare yekuti zvionekwe kuti vagari vari kurwara nekuda kwei nokudaro havangati pari zvino ichokwadi kuti vanhu vari kurwara nepamusana pemvura yavari kunwa.
Pamari yemvura inonzi nevagari yakawandisa, VaMlambo vanoti panoda kutanga paongororwa mamita emvura dzinoshandiswa nevagari zvoonekwa kuti zviri kupindirana here nemvura yavari kubhadhariswa.